တရုတ်နိုင်ငံ၏ CanSino COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ CanSino COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
ကွာလာလမ်ပူ၊ သြဂုတ် ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မလေးရှား နိုင်ငံအနေဖြင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရာတွင် အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် တရုတ်နိုင်ငံCanSino Biologics ကုမ္ပဏီ မှ ထုတ်လုပ်သော တစ်ကြိမ်သာ ထိုးနှံရန်လိုအပ်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ်ကို ယနေ့ ဩဂုတ် ၂၀ ရက်တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆေးအကြိမ်ရေ ၂၀၀,၀၀၀ စာ အသင့်ထိုးနှံနိုင်သည့် Cansino ကာကွယ်ဆေး ပထမသုတ်သည် မလေးရှားနိုင်ငံမှ မှာယူထားသည့် ကာကွယ်ဆေး စုစုပေါင်း ၃.၅ သန်း ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း နည်းပညာနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းအထောက်အပံ့က မလေးရှားနိုင်ငံ၌ အမျိုးသား COVID-19 ခုခံအားစနစ်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အား ပိုမိုအရှိန်မြှင့်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး အထူသဖြင့် လက်လှမ်းမမီသောဒေသများရှိ ပြည်သူများ အတွက် ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်မည့် ရည်မှန်းချက်အား ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသည် CanSino ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ဇွန်လတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ပြင်မလေးရှားနိုင်ငံ၌ တရုတ် Sinopharmမှ ထုတ်လုပ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများနှင့် တရုတ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Sinovac Biotech မှ ထုတ်လုပ်သော ကာကွယ်ဆေးများကိုလည်း အရေးပေါ်ဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုရန် အတည်ပြုချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့အနက် တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းပြီးသားဖြစ်သော Sinovac ၏ Coronavac ကာကွယ်ဆေး နှင့် ပြည်တွင်းဖြည့်စွက်ပြီးသောထုတ်ကုန်များကိုမလေးရှားနိုင်ငံအမျိုးသားကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ခဲ့သော ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ သြဂုတ် ၁၉ ရက်အထိ လူဦးရေ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်း မှာ အနည်းဆုံး ကာကွယ်ဆေး ၁ ကြိမ်ထိုးနှံထားပြီး ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Malaysia takes first delivery of China’s CanSino COVID-19 vaccine
KUALA LUMPUR, Aug. 20 (Xinhua) — The first batch of the single-dose COVID-19 vaccine developed by Chinese company CanSino Biologics arrived in Malaysia on Friday, boosting the country’s capability in the fight against the pandemic.
The first batch, comprising some 200,000 finished products, is part ofatotal of 3.5 million doses that have been ordered by Malaysia, the Science, Technology and Innovation Ministry said inabrief statement.
This supply will be able to further intensify the National COVID-19 Immunization Program especially in low access areas and in turn help Malaysia to achieve immunity targets, the statement said.
Malaysia conditionally approved emergency use of the vaccine in June. The COVID-19 vaccines developed by China’s Sinopharm and the vaccines made by the Chinese biopharmaceutical company Sinovac Biotech have also received approval.
Among them, Sinovac’s Coronavac finished vaccines imported from China and the locally fill-and-finish products have been used in Malaysia’s national immunization program.
Malaysia has been ramping up its vaccination drive which started in February. As of Thursday, 54 percent of the population has received at least one dose of vaccine and 36 percent are fully vaccinated. Enditem
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် နျူကလီးယားအရေးဆွေးနွေးရန် အမေရိကန်နိုင်ငံ နျူကလီးယားအထူးသံတမန် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသွားမည်
ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်ကြားမှ တရုတ်-အာရပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ တဖြည်းဖြည်းအရှိန်ရလာ
အင်ဒိုနီးရှား နှင့် မလေးရှားအကြား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသူများအတွက် လမ်းကြောင်းများ ပြန်ဖွင့်ပေးရန် သဘောတူ